Nohavaozina ny WhatsApp ary azo atao izao ny mandefa hafatra amin'ny alàlan'ny Siri | Vaovao momba ny gadget
Omaly vao nanomboka tamin'ny fomba ofisialy Apple iOS 10, ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa finday Cupertino, ary Nanararaotra nanangana ny fanavaozana azy natao tamin'ny rindrambaiko vaovao koa ny WhatsApp ary miaraka amin'ny fanatsarana vaovao sy mahaliana. Anisan'izany, misongadina ny fahafahan'ny fampiasana Siri handefa hafatra na hanao antso amin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo.
Raha efa nametraka ny kinova farany an'ny WhatsApp ho an'ny iOS ianao dia afaka angataho i Siri handefa hafatra na hiantso olona, miaraka amin'ny fampiononana aterak'izany. Mazava ho azy, tadidio fa amin'ny fotoana voalohany ampiasanao ity fampiasa vaovao ity dia angatahina fahazoan-dàlana aminao.
Ampahafantaro fotsiny i Siri miaraka amin'ilay "Hey Siri" mahazatra, arahin'izay tadiavinay, izay "handefa WhatsApp any amin'i Rocío" na izay fifandraisana nampifandraisinao tamin'ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo. Manaraka izany dia tsy maintsy mibaiko ny hafatra tianao halefa any amin'i Siri ianao.
Tsy io ihany no zava-baovao atolotry ny WhatsApp antsika amin'ny fanavaozana farany ary afaka manomboka izao ihany koa isika valio ny antso an-tariby avy amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra eo no ho eo avy eo amin'ny efijery fanidiana. Azontsika atao koa ny manampy widget izay hahafahantsika mahita, ohatra, ny hafatra farany voaray.
WhatsApp ho an'ny iOS dia toa nanomboka nanomboka nampiditra endri-javatra izay efa niandrasan'ny mpampiasa iPhone efa ela, na dia indrisy mbola lavitra ny lalan-kaleha ary asa sy safidy maro no hapetraka hametraka azy amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny hafa eo noho eo. fampiharana fampiharana.
Ahoana ny hevitrao amin'ny vaovao atolotry ny fanavaozana WhatsApp farany indrindra ho an'ny iOS?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Nohavaozina ny WhatsApp ary azo atao izao ny mandefa hafatra amin'ny alàlan'ny Siri
Ireo no mahasamihafa ny Apple Watch Series 2 vaovao sy ny Apple Watch Series 1